Sawiradaada Sawirada Google ayaa lagusoo bandhigay khariidad leh Khariidad Sawir ah | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Sawir
Khariidadda Sawirka waa barnaamij cusub oo kuu oggolaanaya inaad sahamiso dhammaan sawirrada ku jira Sawirada Google iyada oo loo marayo khariidad. Codsi dhan oo loogu talagalay kuwa adeegsada sawir-gacmeedka Google-ku waxay u dhowdahay muhiim.
Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in sanado badan sumadaha meelihii aan sawirada ka soo qaadnay lagu daray, hadda waxaan dib ugu laaban karnaa xusuusta oo jalleec deg deg ah ayaan ku ogaan karnaa halka laga qaaday sawiradaas mudada dheer la sugayay. Hawshan uu Khariidadda Sawirku ina siinayo lama heli karo Sawirada Google, marka waa wax ku daris weyn si aad uga heli karto sawirada aad ku qaadatay meel cayiman.
1 Adeegsiga la'aanta Sawirada Google
2 Shuruudaha Khariidadda Sawirka
3 App laftiisa
Adeegsiga la'aanta Sawirada Google
Sawirada Google waa a muuqaalka muuqaalka firfircoon ee firfircoon taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan dhamaan sawiradeena ku leenahay daruurta waxaana lagu gartaa miirayaasha sirdoonka macmalka ah ee maareeya abaabulida dhamaan sawiradeena si weyn.
Laakiin wax walbaa kuma fiicna Sawirada Google, waana seegnay, sida aan ku haysanno IOS, ikhtiyaarka ah awood u yeelan karto inaad tuurto dhammaan sawirada ku yaal khariidada si loo helo sawiradeena lagu qaaday goob cayiman. Marka si aan u xallino dhibaatadan waxaan haynaa barnaamij cusub oo la yiraahdo Photo Map.
Muxuu Khariidad sawir sameeyaa waxay muujineysaa sawirrada lagu qaaday khariidad iyo noo badbaadiyo waqti raadinta gallery gacanta. Wax walba waxaa laga arki doonaa khariidad ay sawiradaasi ka soo muuqan doonaan; Aynu nidhaahno waxay la mid tahay Google Earth markii lagu ballaadhiyo gobol ka mid ah meerayaasha, sawirro tiro badan oo ay soo dejiyeen dadka isticmaala ayaa soo baxa.
Shuruudaha Khariidadda Sawirka
Wixii Khariidadda Sawirka ah inay si habboon u shaqeyso waxay u baahan tahay wax yar oo shuruud ah:
App ayaa u baahan ku xir Google Drive kaaga si aad u hesho faylashaada.
Tani waa sababta oo ah Sawirada Google API uma dirto macluumaadka goobta barnaamijyada dhinac saddexaadtaas oo macnaheedu yahay in Khariidadda Sawirku ay tahay inay gasho faylasha "dhabta ah" si loo akhriyo astaamaha goobta laga helo macluumaadka EXIF ​​ee sawir kasta.
Sidaa darteed, inaad si fiican u ogtahay waxaad u hoggaansan tahay marka aad u fasaxdo inuu isticmaalo Google Drive-kaaga (gaar ahaan haddii aad hayso macluumaad xasaasi ah), maadaama aan ku kalsoonahay horumariye adeegsan doona xogta Drive-ka. Haddii aan kaliya u isticmaalno koontada Google Drive sawirrada safarka iyadoon dhab ahaan wax gaar ah ama macluumaad xasaasi ah lahayn, Khariidadda Sawirka ayaa awoodi doonta inay ku bilawdo sawirradaada khariidad.
Haddii aad isaga u fasaxdo inuu u adeegsado sawirrada aad ku haysato Google Drive ka qaado macluumaadka EXIF ​​sawirada, Khariidadda Sawirka ayaa ka taxadari doonta in sawirradaada la dhigo khariidad iyo muujinta inta laga qaaday goob kasta.
Qaar ka mid ah astaamaheeda ugu caansan waa suurtagalnimada beddel mawduuca khariiddada, tirtir sawirrada oo xitaa la wadaag si toos ah uga socota Khariidadda Sawirka. Ikhtiyaar kale ayaa ah awooda lagu raadsado sawirro mahadsanid magaca faylka iyo xogta aan sidoo kale ku leenahay astaamaha EXIF. Tan waxaa kujira sharaxaadda feylka iyo dhibcaha la bixiyay.
Khariidadda Sawirka waa barnaamij waxaan ku haysannaa bilaash xayeysiis, inkasta oo ay leedahay nuqulkeeda bilaa xayeysiis dhan 8,49 euro. Codsi aad u faa'iido badan waxaanan rajeyneynaa inuu soo kici doono G weyn si loo helo baytariyada isla markaana ugu dhakhsaha badan lagu soo bandhigo muuqaalkan Sawirada Google (taasi waxay sii socotaa in lagu cusbooneysiiyo wararka), maadaama aan la fahmin in maalmahan aynaan jalleecin deg deg ah ku sameyn karin qariirad oo aan ka heli karno sawiradeena halka ay ku baxeen.
Codsi ah Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo oo aad sidaas yeelato khariidad dhan taas oo ah in sawirrada laga daawado goobta laga qaaday. Sharad weyn oo looga faa'iideysto la'aanta weyn ee barnaamijka Google ee sawirada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Khariidadda Sawirku waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sahamiso Sawirradaada Google khariidad
Samsung waxay tixgelinaysaa furitaanka amarka degdegga ah ee 25W iyo soo saarista habka "super night" ee Galaxy S10